Yenza ingxaki, emva koko ubize isisombululo | Martech Zone
Yenza ingxaki, emva koko ubize isisombululo
NgoLwesibini, Februwari 14, 2006 NgoLwesibini, Oktobha 21, 2014 Douglas Karr
Funda ngaphezulu ku OneCare ngoku, isoftware ebandakanya uhlaziyo lwe-antivirus, i-backups, uhlaziyo kunye nenkonzo yabathengi. Ndicinga ukuba uMicrosoft uyamkele ekugqibeleni into yokuba abanako ukwenza isoftware enkulu kwaye ibaxabisa imali eninzi. Ndicinga ukuba isisombululo esisiso kuphela kukuba iMicrosoft iphume nenye imveliso esiyihlawulelayo ukunceda ukulawula iingxaki abazenzileyo kwasekuqaleni.
Oku, zihlobo zam ezilungileyo, kungquzulwano olupheleleyo lomdla. Ndicinga ukuba kuhambelana neenkokheli zethu eWashington ukuyila iindleko zokulwa urhwaphilizo. Inkxalabo epheleleyo apha kukuba iMicrosoft inokuzuza ngokwenyani ishiya ii-loops zokhuseleko kunye neengxaki kwisoftware yayo eya kuthi ithathe abanye iAntivirus kunye nabaphuhlisi boKhuseleko ixesha lokufumana. Oko kubeka iMicrosoft phezulu kwemfumba yale nkonzo. Inokubetha ukhuphiswano kwaye ibe lelinye inyathelo elinengeniso kwiMicrosoft.
Wowu. NGABA ukho umntu obukele oku kusenzeka? Nabani na?
Uhlobo lweCSS lweKhowudi kwiBhlog yakho
Oku kundikhumbuza abathengisi be-vacuum abahambahambayo abalahla ingxowa yegunk kwikhaphethi yakho, ngoko unyanzelekile ukuba ubone idemo.
Uthini umtshabalalisi oza nazo zonke iimpuku kunye neencukuthu, phambi kokuba anikezele ngenkonzo?
Indlela yokuya kwi-Micro$ off! Ngoku ukwinqanaba phakathi kwee-'30s zaseChicago izigebenga ezibaleka uluntu "zifuna imali yokhuseleko" - kungenjalo, zinokophuka iiWindows.